Cyclooctanone, Hinokitiol, Dimethyl Disulfide - ဓာတုဓာတ်ပစ္စည်းများသည်
Wuxi Rejoys Chemical Technology Co. , Ltd. သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအရည်အသွေးမြင့်တက်ကြွသောဆေးဝါးပစ္စည်းများ (API) နှင့်အဓိကအလယ်အလတ် engaged ဒဏ်ငွေနှင့်အထူးဓာတုပစ္စည်း、 ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကျွမ်းကျင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Wuxi Rejoys သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြင့်မောင်းနှင်သည့်ဖောက်သည်ကိုအာရုံစိုက်သောကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဆေးဝါး၊ ဇီဝနည်းပညာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင့်မြင့်နှင့်အသစ်သောဓာတုပစ္စည်းများကိုတရုတ်အခြေစိုက် ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
1536209-84-3 | ၂,4 ဒီဂရီ ...
ဖော်ပြချက် DSDA; SO2DPA; 4,4′-SULFONYLDIPHTHALICANHYDRIDE; 4,4′-Sulfonyldiphthalicdianhydride; 5,5′-Sulfonylbis-1,3-isobenzofurandione; diphenylsulfonetetracarboxylicdianhydride; 5,5′ -soben-3b-isobenzofurandione; diphenylsulfonetetracarboxylicdianhydride; 5,5′ -ssbbb; 3-isobenzofurandione; diphenylsulfonetetracarboxylicdianhydride၊ 3,3 ′, 4,4′-Diphenylsulfonetetraca ...
ဆေးဝါးအလယ်အလတ်, ပိုးသတ်ဆေးအလယ်အလတ်? အလယ်အလတ်ကဘာလဲ?
အလယ်အလတ်ပစ္စည်းများသည်အလွန်ကောင်းသောဓာတုထုတ်ကုန်များ၊ ၄ င်း၏အနှစ်သာရသည်“ အလယ်အလတ်အဆင့်”၊ ထုတ်ကုန်၏အလယ်တွင်ထုတ်ကုန်အချို့ထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မှကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည် ...